७७ जनाको ज्यान जोगाउने क्याप्टेन आङगेलु शेर्पासँग रहेकी यी महिला को-पाइलट को हुन् ? जसको कुनै चर्चा भएन (भिडियो सहित) – Kavrepati
Home / प्रमुख समाचार / ७७ जनाको ज्यान जोगाउने क्याप्टेन आङगेलु शेर्पासँग रहेकी यी महिला को-पाइलट को हुन् ? जसको कुनै चर्चा भएन (भिडियो सहित)
admin3weeks ago	प्रमुख समाचार Leaveacomment 944 Views
काठमाडौ । सोमवार बुद्ध एयरको विमानलाई ठूलो दुर्घटनावाट जोगाउन सफल भएपछि पाइलट क्याप्टेन आङगेलु शेर्पाको चर्चा निकै चुलिएको छ ।
उनको सामाजिक सञ्जाल खोतलेर ब्यक्तिगत जिवनका कुराहरु पनि सार्वजनिक गर्न थालिएका छन् । माथिको तस्बिरमा क्याप्टेन आङगेलु शेर्पामा देखिएकी युवतीका बारेमा के तपाईलाई थाहा छ ? उनी पनि पाइलट नै हुन् ।
जसको नाम पेमा लामा हो । पेशाले पाइलट पेमा क्याप्टेन आङगेलु शेर्पाकी श्रीमती पनि हुन् । उनले पनि विगत ६ वर्ष देखि बुद्ध एयरकै जहाज उडाउँदै आएकी छन् ।
Previous के थियो क्याप्टेन एजी शेर्पाले गरेको खराब समयमा सहि निर्णय ?
Next शिद्धार्थको निधन पछि विक्षिप्त बनेकी शहनाजको बारेमा ज्योतिषीले गरे यस्तो डरलाग्दो भविष्यवाणी